/blog/Gallery/7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa Suuqa Noopept
Posted on 09 / 16 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Daawada “Noopept“, Waxaa loo adeegsaday hagaajinta xusuusta, waxaa soo saaray 1992 koox cilmi baaris ah oo ka tirsan Machadka Cilmi-baarista Sayniska ee Farmashiga. Zakusov VV Daawadana waxaa laga aqoonsaday oo kaliya Ruushka, laakiin sidoo kale Mareykanka, halkaas oo lagu sharciyeeyay seddex sano ka dib, ka dib markii laga diiwaangeliyey guriga. Wareejinta xuquuqda calaamadaha ganacsiga iyo dib u habeyn ganacsi oo dhowr ah ma aysan saameyn ku yeelan daawada. Labaatan sano ka dib markii la alifay Noopept, iibkeeda waxaa lagu qiyaasay $ 6.2 milyan sanadkii.
"Noopept" wuu ka duwan yahay daawooyinka kale ee nootropic, sidoo kale lagu daray kooxdan, taas oo ah inay isla markaa saameyn ku yeelaneyso dhammaan heerarka habka xusuusta:
• Hawlgelinta hore ee macluumaadka soo socda,
• Kaydinta wakhtiga dheer ee walxaha,
• dib u soo noqoshada macluumaadka.
Tixgelinta habka waxqabadka ee daawooyinka nootropic guud ahaan iyo gaar ahaan "Noopept" ayaa kaa caawin doona saxitaanka isbarbardhiga daroogada
iyada oo wakiillada kale ee ka mid ah nootropic group.
10 mg of N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester waxaa lagu geliyaa dhiigga nidaamka dhiigga oo aan isbeddelaynin mareenka mindhicirka iyo ka dibna, ka hortagaya barxadda dhiigga-maskaxda, geli maskaxda, halka, ka dib 15 daqiiqado, waxaa lagu ogaadaa , iyo diiradda. Nolosha nuska ah ee ka timaadda dhiigga dhiigga wuxuu dhacaa saacadaha 0.38. Walaxda ayaa qayb ahaan la taaban karo, inta lagu jiro nooca phenylacetic acid, cycloprolylglycine iyo phenylacetylproline waa la sameeyay. Bioavailability waxaa lagu go'aamiyaa heerka 99.7%.
Calaamadaha budada Noopept
Noopept waxaa loo adeegsadaa daaweynta qalalaasaha, xusuusta lumay, iyo sidoo kale hawlaha kale ee garashada iyo dareenka maskaxeed ee ka soo horjeeda ciribtirka xannuunada postmodule, xanuunka asthenic, dheecaanka dhiigga maskaxeed, maskaxda maskaxda iyo xaaladaha quudinta oo yareeya kartida maskaxeed.
Kiniiniga "Noopept" waxaa la qaataa cuntada kadib. Qiyaasta ugu horreysa ee 20 mg oo loo qaybiyay laba qiyaasood (subax iyo galab), oo leh waxtar ku filan iyo dulqaad wanaagsan, waxaad aadi kartaa 30 mg (seddex jeer maalintii 10 mg), iyadoo la tirinayo si soo dhaweynta ugu dambeysay aysan uga dambeyn 18 saacadood. Hal koorso ayaa soconaya 1.5 ilaa 3 bilood, koorso labaadna waxaa lagu fulin karaa nasasho hal bil ah.
Noopept Waxyeellooyinka iyo xanibaadaha
Ku dhowaad dhammaan budada nootropics macnaheedu waa mamnuuc isticmaalka haweenka inta lagu jiro uurka. Si kastaba ha noqotee, soo dhaweynta "Noopept" ee liiska kahortagga ayaa lagu daray:
• xaddidaadda da 'da' ilaa da'da 18,
• yaraanta lactase,
• Calaamadaha lagu garto beerka iyo kelyaha,
• Cudurka qaaxada-laktooska,
• lakinto dulqaadasho la'aan.
Arrinta ugu dambeysa ee la xiriirta fal-celinta cudurada wadnaha (caanaha) ee ka dhexeysa Slav-ka bari waxaa lagu arkay 16-18% dadka. Yurub, tan waa celceliska tirada - in badan oo reer Austaralia ah (illaa 20%), Finn (18%), Talyaaniyiin (waxay kuxirantahay gobolka 15 ilaa 52%), Balkans iyo dadka deggan Crete (56%). Koonfurta Faransiiska, tiradani waxay gaareysaa 67%, iyo Sicily - 71%. Boqolleyda dulqaad la'aanta laktoos ee dadka degan Bartamaha Aasiya waa 80 - tani waxay ka dhigan tahay in 4tii qof 5tii qof aysan isticmaali karin dawadan nootropic. Xaaladdan oo kale, waxaa aad u roon in loo beddelo daaweyn kale oo dabiici ah oo leh saameyn nootropic ah oo la mid ah (tusaale ahaan, "HeadBooster"), laakiin sidoo kale soo dhaweynta "Noopept", waa lagama maarmaan in la tixgeliyo xasaasiyadda qaybaha .
Dhibaatooyinka ay keento "Noopept" waxaa ka mid ah fal-celinta xasaasiyadda iyo suurtagalnimada in dhiig kar laga qaado dadka qaba dhiig-karka.
Jawaabta "nootropian" ee ku saabsan ficilka "Noopept" iyo analogues dabiiciga ah
Dadka u isticmaala daroogada nootropic ujeedooyin caafimaad, laakiin si loo ballaariyo xusuusta loona kiciyo waxqabadka maskaxda (“nootropics“), Sida caadiga ah waxay la kulmaan saameynta walxaha kala duwan waxayna sameyn karaan qiimeyn isbarbardhig ah
Marka, "Noopept" waxaa lagu sifeeyaa inuu yahay daroogo, taas oo horeyba usbuuca labaad ee soo dhaweynta kuu saamaxaya inaad sii wado waxqabadka caqliga ee kordhay maalintii oo dhan. Waxaa la xusay in aysan jirin madax xanuun badanaa ku dhaca isla culeyska, haddii daawada aan la qaadanin waqti dheer. Riyooyin gooni ah oo xusid mudan, oo markii aad helayso nootropy-kani noqdaan kuwa cad oo muujiya.
Astaamo la mid ah sharraxaadda shakhsiga ah ayaa ah, tusaale ahaan, Semax, Optimentis (Optimumis), HeadBooster (HeadBuster), iwm, laakiin isku diyaarinta oo dhan looma sifeeyo si isku mid ah. Tusaale ahaan, "Fenibut", oo sidoo kale loo isticmaalo xoojinta xusuusta iyo fiirogaarka, yareynta neerfayaasha, isla mar ahaantaana qofka ka dhigaysa mid aan qiiro lahayn oo leh falcelin yar oo gaabis ah.
Budada Noopept Contraindications
Noopept laguma qoro bukaanada qaba xanuunka kelyaha daran, xanuunka beerka, cillada laktoos, glucose-galactose malabsorption ama laktooska dulqaad la'aan. Intaa waxaa dheer, waa lagama maarmaan in la iska ilaaliyo daawada loo isticmaalo uurka, naas-nuujinta, iyo sidoo kale bukaannada ka hooseeya 18 iyo bukaannada leh shay-baarka shakhsi ahaaneed ee daroogada.
Codsiga uurka iyo nuujinta
Daawada Daawada Hoenopt ee loogu talagalay naas-nuujinta iyo haweenka uurka leh waa mid aan loo baahnayn, maadaama aysan jirin macluumaad lagu kalsoon yahay oo ku saabsan waxyaalihii isbeddelka ah ee nooca soo-saarka ah ee koritaanka ilmaha caloosha ku jira ama ilmo cusub oo naas-nuujinaya haweenka daweynaya daawada.
Qaadista iyo Maamulka
Hopepe waxaa loo isticmaalaa maamulka afka. Kiniinnada waa in la qaataa kadib marka cuntada la cabo oo cab cabbitaan badan. Marka la eego xaqiiqda ah in daroogadu leedahay saameyn xiiso leh, waa in la qaato ugu danbeyn 18: 00. Muddada daaweynta iyo qiyaasta daawada dhakhtarku u xisaabtamo madaxbannaan.
Bilowga daaweynta, bukaan-socodka waxaa lagu talinayaa in la qaato mgmarka 10 ee daroogada 2 maalintii. Haddii, markaad qaadato daawada qadar yar, ma suurtagasho in lagu gaaro saameynta daaweynta lagama maarmaanka ah, tirada soo dhoweynta ayaa la kordhiyay ilaa saddex jeer maalintii.
Daawada waxaa loogu talagalay isticmaalka muddada dheer, koorsada daaweynta waxay ku kala duwanaan kartaa 1.5 ilaa bilaha 3. Waa suurtogal in la sameeyo koorsooyin soo noqnoqda ah oo daaweyn ah soddon maalmood ka dib markii la soo qaatey daawadii ugu dambeysay.
Haddii xanuun loo baahan yahay si loo qaato Noopept qiyaaso badan muddo dheer, markaa bukaanku waa inuu ku jiraa daaweyn joogto ah.
Budada Noopept Badeeco badan
Xitaa iyadoo la soo dhaweynayo Noopept qiyaaso badan, bukaanadu ma sameysmaan calaamadaha sunta rasmiga ah. Inkasta oo aanay ku jirin sunta daroogada, haddii aad ogtahay in bukaanku si khaas ah u qaatay daawada qadar sare, markaas waa inuu biyo raaciyaa caloosha oo hubiyaa soo saarida kaarbiyaha firfircoon iyo cabitaanka badan.
Naasaasiyadda Noopept Waxyeellooyinka soo raaca
Noopept si fiican u dulqaadan. Inta lagu jiro daaweynta, bukaanku waxay yeeshaan dhiig-karka iyo fal-celinta xasaasiyadeed ee kala duwan.
Haddii, marka la isticmaalayo Noopept, bukaanku wuxuu leeyahay astaamaha aan calaamadaha lahayn ee daawada, waa in isla markiiba la ogeysiiyaa dhakhtarka daweynta kaas oo go'aan ka gaari doona talo-bixinta daaweyn dheeraad ah.
Budada Noopept Shuruudaha iyo xaaladaha kaydinta
Noopept waa in lagu kaydiyaa qalalan, laga ilaaliyo meel iftiin ah, taas oo aan la heli karin carruurta. Muddada kaydinta diyaarinta Hoenopt waa sanadaha 3.
Dhamaan waxyaabaha ku saabsan Trenbolone Enanthate Powder
7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa Bromantane 7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa Sunifiram